Iva China 220kV Double Loop Transmission Tower Manufacture uye Fekitori |XY Tower
⦁ kambani yeChinese yakabatanidzwa yemagetsi emagetsi, inonyanya kupa zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvemagetsi kumakambani emagetsi emumba uye ekunze emagetsi ekushandisa uye nevatengi vemagetsi-vanoshandisa maindasitiri.
⦁ Nyanzvi mugadziri mumunda wetransmission line tower/ poleyekufambisa uye kugovera magetsi,telecommunication tower/danda, substation chimiro,uyestreet light polenezvimwewo zvakare mugova akakosha wemugadziri wetransformer, silicon simbi yekugadzira sheet uye chiteshi chemagetsi.
⦁ KUVA ZVINOGONA mukuita mabasa edu uye nekupa masevhisi kune vatengi vemukati nekunze.
⦁ KUVA NEZVINHU mukubata mabasa edu nemasevhisi kuti tiwane mhedzisiro yakanyanya munguva ipfupi inobvira.
masevhisi edu makuru uye zvigadzirwa zvinosanganisira:
electric substation chimiro
PV inosimudza chimiro
A transmission tower kana power tower (yemagetsi pylon kana electric pylon muUnited Kingdom, Canada and parts of Europe) chimiro chakareba, kazhinji chishongo chesimbi, chinoshandiswa kutsigira tambo yemagetsi pamusoro.
Iwo anoshandiswa mune yakakwira-voltage AC uye DC masisitimu, uye anouya muakasiyana maumbirwo nehukuru.Kureba kwakajairika kunotangira pagumi nemashanu kusvika pamakumi mashanu nemashanu m (49 kusvika 180 ft), kunyangwe akareba ari 370 m (1,214 ft) shongwe dze2,700 m (8,858 ft) span yeZhoushan Island Overhead Powerline Tie.Mukuwedzera kune simbi, zvimwe zvinhu zvinogona kushandiswa, kusanganisira kongiri uye huni.
Angle-simbi shongwe, yakajairwa quadrangular truss chimiro chekutaurirana shongwe, uchishandisa Q345B yemhando yepamusoro simbi seyo huru shongwe yemuviri zvinhu, yakasimba chimiro, diki deformation;angle simbi splicing connection, light-weight parts, tower inogona kutakurwa nemaoko uye kuiswa pamutengo wakaderera.Maximum 6 akaturikidzana epuratifomu anogona kuve akashongedzerwa, yega yega inotsigira matanhatu antennas.
Material Kazhinji Q345B/A572, Yakaderera Goho Simba ≥ 345 N/mm²
Q235B/A36, Yakaderera Goho Simba ≥ 235 N/mm²
Pamwe neHot rolled coil kubva kuASTM A572 GR65, GR50, SS400, kana chero imwe chiyero nemutengi anodiwa.
Welding Welding inoenderana neAWS D1.1 chiyero.
CO2 welding kana yakanyura arc auto nzira
Hapana kutsemuka, vanga, kupindirana, layer kana kumwe kukanganisa
Welding yemukati nekunze inoita kuti danda riwedzere kunaka muchimiro
Kana vatengi vachida chero zvimwe zvinodiwa zve welding, isu tinogonawo kugadzirisa sechikumbiro chako
Galvanization Kupisa dip galvanization zvinoenderana neChinese standard GB/T 13912-2002 uye American standard ASTM A123;kana chero imwe mwero nemutengi anodiwa.
Painting Maererano nechikumbiro chevatengi
Galvanized chiyero: ISO: 1461-2002
Zvakapfuura: 132kV Single Circuit Angle Steel Tower
Zvinotevera: 330kV Electric Transmission Line Tower
330 simba rekufambisa tambo
magetsi ekufambisa shongwe
kugadzirwa kwesimbi lattice shongwe